Iigesi kwiikati: oonobangela kunye nezisombululo | Amakati eNoti
Iigesi kwiikati: oonobangela kunye nezisombululo
UMaria Jose Roldan | | Izifo, Amaqhinga
Los irhasi kwiikati Zihlala ziyingxaki esingaziniki kubaluleke kakhulu de ziqale ukunuka kakhulu. Zihlala ziyinxalenye yendalo yenkqubo yokwetyisa, kodwa xa ezinye iimpawu zivela, impilo yoboya iya kuqala ukufuna ingqalelo.
Masibone Zithini izizathu, iimpawu kunye nezisombululo zeekati.
1 Izinto ezibangela irhasi kwiikati
2 Iimpawu zerhasi kwiikati
3 Unyango lwasekhaya lwegesi kwiikati
3.1 Kuphephe ukunika ubisi
3.2 Mnike ukutya okuphantsi kwifayibha nakwiisiriyeli
4 Unyango olungakumbi ukunyanga igesi kwiikati
5 Ngaba yingxaki yempilo?
6 Uya nini kugqirha wezilwanyana?
Izinto ezibangela irhasi kwiikati
Uninzi lweegesi zivela ekungeniseni umoya, ke esinye sezizathu eziphambili kukuba ikati yitya ngokukhawuleza okukhuluNokuba uyakhuphisana nenye ikati ukuyifumana okanye nokuba uyifumene uxinzelelo (ulwazi oluninzi apha). Esinye isizathu kungenxa yokuba uqalile ukutya kanye emva kokubaleka nokuzilolonga ithutyana. Kodwa ayizizo kuphela izizathu.
Ukutya okuphezulu kwengqolowa, umbona okanye ezinye izinto kunokubangela irhasi engaphezulu. Kule meko, kufuneka kuthiwe iikati zizilwanyana ezitya inyama, kwaye Inkqubo yakho yokwetyisa ayikwazi ukwetyisa oku kutya kakuhle. Kananjalo, ukuba banikwa ubisi okanye iimveliso zobisi, banokuphelisa negesi. Kwaye, ngendlela, kuya kufuneka uphephe ukusondela enkunkumeni, kuba inokutya ukutya okungalunganga kwaye ikwenze uzive ungalunganga. Kuya kufuneka uhlambe yonke imihla, kungenjalo uya kuba semngciphekweni wokwenza oko iibhola zeenwele, kwaye ngenxa yoko, unokuba negesi.
Los izifunxi-gazi emathunjini kunye izifo zesisu Banokuba ngunobangela wekati enale ngxaki.
Iimpawu zerhasi kwiikati
I-99% yegesi yamathumbu ayinavumba, ke ngoko ukwazi ukuba ikati yethu ineengxaki zokugaya akusoloko kulula. Kodwa ungakhathazeki, Nalu uluhlu lwezona mpawu ziqhelekileyo:
Ingxolo kwiphecana lesisu
Unyango lwasekhaya lwegesi kwiikati
Ukuba irhasi yekati yakho iye yaba yingxaki, kwaye ngakumbi ukuba ukrokrela ukuba unesifo, kufanelekile ndimse kugqirha wezilwanyana ukuba uvavanye. Kodwa ekhaya unokwenza izinto ezininzi, ezinje ngezi zilandelayo:
Kuphephe ukunika ubisi
Ubisi lweenkomo lune-lactose, esiswekile iikati ezingakwaziyo ukuyetyisa kuba ayivelisi i-enzyme eyimfuneko, i-lactase. Kuya kufuneka uphephe ukunika ubisi kunye nezinye iimveliso zobisi ezivela kwimfuyo, Ngaphandle kwabo bangenayo i-lactose.
Mnike ukutya okuphantsi kwifayibha nakwiisiriyeli
Uninzi lokutya kwekati kuphezulu kwifayibha kunye nokutya okuziinkozo, okuthi nangona kuyimithombo yeprotheni, ezi zilwanyana azinako ukuzetyisa kakuhle. Ukuthintela ikati yakho ekufumaneni irhasi, Kuyacetyiswa ukumnika ukutya okunotyebileyo kwiiproteni zemvelaphi yezilwanyana kunye namahlwempu kwiicereal nakwiziphumo.
Unyango olungakumbi ukunyanga igesi kwiikati
Ukongeza koku kungasentla, siza kukuxelela ngamanye amayeza okulungeleyo ukuba ... iimeko).
Kwelinye icala, licebo elihle ukubhala phantsi into ityiwa yikati yakho kwisithuba seeyure ezingama-24 Ngenjongo yokukwazi ukwenza ulandelelwano olulungileyo kwaye ke ufumanise ukuba zeziphi ukutya ezinokubangela ezi gesi.
Ukongeza, ukunceda ikati yakho ukuba isuse ezi gesi, ngumbono olungileyo ukugcina oku kulandelayo engqondweni:
Guqula ukutya kwakho rhoqo kuye kwifayibha esezantsi kunye nokutya okwetyiwa ngokulula. Ugqirha wezilwanyana unokucebisa okona kulungileyo kwifeline yakho.
Tyisa ikati yakho ukutya okuncinci kodwa rhoqo emini.
Ukuba unekati engaphezulu kwesinye ekhaya, emva koko Kuya kufuneka ubondle ngokwahlukeneyo ukubenza bangalwi ngokutya.
Thintela ikati yakho ekutyeni ukutya okonakeleyo (umzekelo, lowo ukwinkunkuma).
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ikati yakho imithambo rhoqo.
Ukuba ucinga ukuba iigesi zinzima kakhulu kumqolo wakho, ke Kuya kufuneka uthethe nogqirha wezilwanyana ukukucebisa ngamayeza alungele iikati kwaye anokukunceda ukuba ukhuphe igesi ngcono.
Kukho izisombululo kwiingxaki zerhasi kwiikati, umzekelo:
Iipancreatic enzyme yongeza
Ungaze unike ikati yakho nayiphi na iyeza okanye isisombululo ngaphandle kokuxoxa kuqala nogqirha wezilwanyana., Nokuba ucinga ukuba ngonyango lwendalo kwaye ayizukulimaza. Ingcali kuya kufuneka ivavanye izinto ezininzi ezinje ngohlobo, ubudala okanye ubunzima besilwanyana sakho sasekhaya.
Ngaba yingxaki yempilo?
Abanini abaninzi beekati ze-gassy, ​​banexhala kakhulu kuba becinga ukuba igesi ecaphukisayo inokuba yingxaki enkulu yezempilo. Ngokwenyani, igesi ezenzekelayo ayifanelanga ukuba iyinto embi, kodwa xa ibaxekileyo ungafuna unyango kuba iya isiba yingxaki enkulu kunokuba ibicinga njalo. Ezinye zeengxaki onokuba usokola kuzo zezi.
IiParasites (olunye ulwazi)
Ukuphazamiseka kwamathumbu emathunjini
Ngayiphi na imeko, ukuba ucinga ukuba ikati yakho inokuba inesigulo, nokuba kungasentla okanye abanye, kubaluleke kakhulu ukuba uye kugqirha wezilwanyana uyokwenza iimvavanyo ezifanelekileyo. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwazi ngqo ukuba kwenzeka ntoni kwikati yakho kwaye ke ngaloo ndlela ufumane unyango olumfaneleyo.
Njengoko sikuxelele ngasentla, kubalulekile ukuba uye kugqirha wezilwanyana Nanini na ucinga ukuba ikati yakho inesigulo esithile, kodwa nangayiphi na imeko, kubalulekile ukuba ubonane nengcali kwimeko yegesi kunye nezinye zeempawu, njengoko oko kunokubonisa ingxaki enkulu yezempilo:
Unentlungu esiswini xa umchukumisa
Khange enze urhudo
Unegazi kwisitulo sakho
Ekugqibeleni, kwaye njengenyathelo lokuthintela, kubaluleke kakhulu ukuba unike ingqalelo apho isilwanyana sakho sinokufikelela khona ekutyeni. Umzekelo, ekhaya, gubungela ngokukhuselekileyo inkunkuma kwaye ungavumeli isilwanyana sakho ukuba sihambahambe okanye sihambe kumhlaba wabamelwane, okanye simvumele ukuba ajikeleze kwiindawo apho kugcinwa khona inkunkuma.
Kananjalo, ukuba isilwanyana sakho sitya ilindle (esakhe kunye nesezinye izilwanyana) ngenxa yokuba sinesondlo kukutya okutyayo, kuya kufuneka ulungise kwaye uthethe nogqirha wezilwanyana ngokwenzekayo.
Irhasi kwiikati kunokuba yingxaki enkulu, kodwa ngala maqhinga ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuwasombulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Izifo » Iigesi kwiikati: oonobangela kunye nezisombululo
ILissette ivonne castillo zambrano sitsho
Ikati yam inesisu esigcwele ziigesi kodwa ayityi kwaye ibhityile kwaye iphantsi, endinokumnika yona ukuze iblast kuba kuvakala ngathi ligubu
Ndiyaxolisa ukuba ikati yakho imbi, kodwa andinakukunceda kuba andinguye ugqirha wezilwanyana.
Ndikucebisa ukuba usise kwingcali.
Ikati yam ineentsuku ezili-10 ubudala, unina wayilahla, ndiyayikhulisa, kodwa lonke ubisi ludumba isisu sakhe kwaye une-colic eninzi kunye negesi, ndingenza ntoni?
Ndikucebisa ukuba umse kugqirha wezilwanyana (andinguye).
Unokuba neentshulube. Kule minyaka basengozini kakhulu.
Ukubuyisela njani ukuzithemba kwekati?
Zithini iimpawu kunye nonyango lwe-jaundice kwiikati?